Isityalo sodaka esomileyo, izixhobo zokutshatisa, izixhobo zePC - iShantui
Iimpawu 1.Convenient indibano kunye disassembly, ukuhamba eliphezulu yenguqu, lula kwaye ngokukhawuleza, kunye nomsebenzi indawo bhetyebhetye. Ubume beCompact kunye nengqiqo, uyilo oluphezulu lweemodyuli Umsebenzi lo ucacile kwaye ukusebenza kuzinzile. 4. Ukuhlala ngaphantsi komhlaba, imveliso ephezulu; Inkqubo yombane kunye negesi zixhotyiswe ngokuphela okuphezulu kunye nokuthembeka okuphezulu. Indawo yokuxuba ikhonkrithi ephathekayo sisixhobo semveliso ekhonkrithi esidibanisa ukugcinwa kwezinto, ubunzima ...
Iimpawu 1.Convenient indibano kunye disassembly, ukuhamba eliphezulu yenguqu, lula kwaye ngokukhawuleza, kunye nomsebenzi indawo bhetyebhetye. Ubume beCompact kunye nengqiqo, uyilo oluphezulu lweemodyuli Umsebenzi lo ucacile kwaye ukusebenza kuzinzile. 4. Ukuhlala ngaphantsi komhlaba, imveliso ephezulu; Inkqubo yombane kunye negesi zixhotyiswe ngokuphela okuphezulu kunye nokuthembeka okuphezulu. Imowudi yokucacisa SjHZS025Y SjHZS040Y SjHZS050Y SjHZS075Y Imveliso yethiyori m³ / h 25 40 50 ...
Amanqaku 1. Isiseko sesakhiwo sasimahla, izixhobo zingafakelwa kwimveliso emva kokuba isiza somsebenzi senziwe saqiniswa kwaye saqiniswa. Ayisi kunciphisi kuphela iindleko zokwakha, kodwa ikwanciphise umjikelo wofakelo. Uyilo lweemodyuli zemveliso lwenza ukuba kube lula kwaye kukhawuleze ukuhlahlula kunye nokuhambisa. 3. Isakhiwo esihlangeneyo ngokubanzi, ukuhlala ngaphantsi komhlaba. Imowudi yokuKhankanywa SjHZN025F SjHZN040F SjHZN050F SjHZN075F SjHZS050F SjHZS075F SjHZS100F SjHZS150F The ...
Iimpawu Isityalo senziwe ngenkqubo yokubethelwa, inkqubo yokulinganisa, inkqubo yokuxuba, inkqubo yolawulo lombane, inkqubo yolawulo lwomoya kunye nokunye okunxulumene noko, iipowder, isongezo samanzi kunye namanzi anokukalwa ngokuzenzekelayo kwaye axutywe sisityalo. Amanqaku aye alayishwa edibanisa umgqomo ngomlayishi wangaphambili. Umgubo uhanjiswa ukusuka kwisilo ukuya kwisikali sokulinganisa ngesixhobo sokuhambisa .Amanzi kunye nesongezelelo samanzi atshalwa ezikalini. Zonke iinkqubo ezinobunzima zizikali zombane. Isityalo sizenzekelayo ...
I-Shantui Janeoo Machinery Co., Ltd.yimveliso yokuqala yokuxuba ikhonkrithi kunye noomatshini bezothutho kumashishini amakhulu aphantsi korhulumente, yi-CREC, i-CRC kule minyaka iqabane lobuchule, isityalo esiphambili sokuxuba ikhonkrithi, isityalo sokuxuba i-asphalt, udaka lokuxuba owomileyo isityalo, isiphelo sokudibanisa ishishini, isipompo sokurhuqa, izixhobo zokulahla inkunkuma kunye neemixube ezahlukeneyo.
Ixesha lokwakha: Nge-Okthobha i-2020 ifildi yesicelo (uhlobo lobunjineli): uhlobo lwezixhobo zokwakha ezidolophini: Isixhobo sokuxuba ikhonkrithi Isicelo: Nge-Okthobha 9, 2020, emva kweentsuku ezininzi zokufakwa kude kunye nesikhokelo, iShantui Janeoo Marine SjHZS75-3E izixhobo zokuxuba ikhonkrithi ziyaphumelela .. .
Ixesha lokwakha: nge-Septemba 2020 intsimi yesicelo (uhlobo lobunjineli): ezolimo, ezamahlathi kunye nolondolozo lwamanzi uhlobo lwezixhobo: izixhobo zekhonkrithi yokuxuba i-SjHZS90-3B silo silo yindawo endala yomthengi. Isicelo: NgoSeptemba 2020, ezi zimbini zeSjHZS090-3B zezityalo zekhonkrithi zeShantui J ...
Isityalo sokuxuba ikhonkrithi yaselwandle iShantui Janeoo SjHZS75-3E sigqibe ngempumelelo ukuveliswa kwemithwalo enzima ngo-Okthobha 9,2020 Ngexesha leentsuku ezininzi zesikhokelo esikude, ivula indlela yokwenza ixabiso kubathengi baseMyanmar. Ukuchaphazeleka kwimeko yobhubhane, injineli yenkonzo emva kokuthengisa ayinakuya ...
I-Shantui Janeoo ifezekisa ukuthengisa okuphesheya phesheya kwezityalo zombini kunye neetraki zokuxuba
Kutshanje, iShantui Janeoo 2XSjHZS120-3B isityalo sokudibanisa ikhonkrithi kunye neeseti ezili-10 zeetrakhi ezixubileyo zekhonkrithi ezili-12 zithunyelwe ngempumelelo kwiiPhilippines, kwaye ukhenketho lwenkonzo yokuncedisa kwiprojekthi yokwakha iMetro Manila kungekudala luza kuqala. Kwindawo yokuhambisa, amalungu agqityiweyo ...
Kutshanje, iiseti ezintandathu zeSjHZS240-3R indawo yokuxuba ikhonkrithi esetyenziswe yiShantui Janeoo kulwakhiwo lweShiheng-Canggang Intercity Railway sele ifakiwe kwaye yanikezelwa ngempumelelo kubathengi. Zonke izixhobo zamkela isamente kwisakhiwo sesilo, kwaye isixhobo ngasinye sixhotyiswe nge ...